Cawad: “Shirka Brussels yuusan idinla noqon sida aad u yareysaneysaan” - Caasimada Online
Home Warar Cawad: “Shirka Brussels yuusan idinla noqon sida aad u yareysaneysaan”
Cawad: “Shirka Brussels yuusan idinla noqon sida aad u yareysaneysaan”
Brussels (Caasimada Online) – Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Soomaaliya Amb. Axmed Ciise Cawad, ayaa daboolka ka qaaday inay muuqato ka faa’iideysi la’aanta Soomaalida shirarka adduunka.
Wasiir Axmed Ciise waxa uu sheegay in Soomaalida oo isku mowqif ah ay tageen madasha shirka ka socda Magalada Brussels ee dalka Belgium-ka, balse ay markii danbe soo baxeen cilado yar.
Waxa uu Wasiirka tilmaamay in muhiimada Shirka yahay in Soomaalida ay helaan waxyaabo badan oo ay u baahi qabto sida maalgashi iyo hormarinta baahiyaha ku xeeran Qaranimada Somalia.
Waxa uu Wasiir Axmed Ciise carab dhabay in madaxda Soomaalida gaar ahaan kuwa Gobolada laga doonaayo inay marka hore muujiyaan dulqaad si buu yiri meesha looga saaro tabashooyinka hadda jira.
Waxa uu cadeeyay in shirka ay kasoo bixi doonaan qodobo lagu wada kalsoonaan doono hase yeeshee ay ku xiran tahay in la muujiyo dulqaad, maadaama waxa laga wada tashanaayo ay tahay masiirka Umadda Soomaaliyeed.
“Maanta waxaan u gudbeynaa wajiga labaad, waxaa shirka kaoso bixi doona war-murtiyadeed lagu wada qanci doono waa inaan dhankeena kala imaana sabar iyo dulqaad aan ku aqbali laheyn heshiisyada dhacaaya”
Wasiir Axmed Cawad ayaa adduunka ku dhaliilay inaysan ka dhabeyn ballanqaadyada loo sameeyo Soomaalida, waxa uuna dalbaday in laga jawaabo wixii ballanqaad ah.
Sidoo kale, dadka dhan ayuu sheegay inay wada yihiin walaal, isla markaana ay muhiim tahay in la garto ahmiyada dalka iyo dadka maadaama ay hormartay dunida.
Geesta kale, waxa uu Wasiirka ku baaqay in Soomaalida ay u midowdo wax wada qabsigeeda maadaama dunida ay garabtaagan tahay.